shiin-yareeyeyaasha - yareeyeyaasha, goos gooska dixiriga ah, sanduuqa dirxi ee dixiriga ah, sanduuqyada meerayaasha, xawaaraha yareeyayaasha, kala-duwanayaasha, maareynta helical, qalabka geesaha lagu shubo, qalabka beeraha lagu gado, cagafyada cagafyada, gawaarida xamuulka, dixirka
Soo-dejiyaha xawaaraha guud ahaan waa mashiin yar oo fudud. Kani waa tareen marsho u dhexeeya matoorka iyo mishiinka oo badanaa loo isticmaalo yareynta xawaaraha awoodda lagu gudbiyo. Gawaarida xawaaraha, oo sidoo kale loo yaqaan 'reducer reducer', waa qalab farsamo ...
Isku xidhka xiriiriye Websaydhka - Taabo Xirfadeed (BS / DIN / ANSI) Xiriiriyaha isku xidhka istaandarka ah ee silsiladaha kala goos gooska ah ee ANSI, ayaa sidoo kale looga faa'iideysan karaa silsiladaha la jeexjeexay meesha xawaare xoog leh ama duruufo adag la kulmayaan. Bixiyay laba biinanka isku xira guntay galay ...
Silsiladda gawaarida birta ah ee saxda ah runti waa qaab aad u hufan oo fara badan oo loo adeegsado gudbinta awoodda farsamada, taas oo, inta lagu gudajiray edbinta codsiyada warshadaha, ay si buuxda u buuxisay ...
Silsiladda gawaarida birta ah ee saxda ah inta badan waa qaab dhab ah oo wax ku ool ah oo loo adeegsado gudbinta awoodda farsamada, taas oo, inta lagu gudajiro codsiyada warshadaha, ay kudhowaad gebi ahaanba dhaaftay dhammaan noocyada kale ...
ISKU-DIRIDDA SILSANKA XARUNTA VC Brand wuxuu leeyahay hanaan wax soo saar oo heer sare ah, iyo adeegyo dhaadheer nolol maalmeedka. Sumaddan wax ku oolka ahi waxay ka kooban tahay ...
ISKU-DIRIDDA SILSANKA XARUNTA Nooca VC wuxuu leeyahay geedi socodka wax soo saar tayo leh, iyo jiritaan adeeg dheer. Calaamaddan guuleysata waxay ku lug leedahay ...